UKUHLALWA KWEZOMTHETHO NGOKUTSHENZELA iLatvia | IXESHA LOKUPHUMELELA 100% ENGABEKI NXAXOLO | IGISA LOKUNDWENDWELA iLatvia, uQoqosho lokuFudukela kwelinye ilizwe ngotyalo-mali lokuhlala eLatvia ngokutyala eLatvia, ukuhlala ngokutyala eLatvia, ukuhlala ngobhaliso ngeenkqubo zotyalo-mali eLatvia,
Ukuhlala kwakhona ngokuTyala imali eLatvia nakwiVisa yeGolide
Sinikezela ngeeNkonzo zoFuduko lwezoQoqosho eLatvia:
● Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eLatvia
● Ubummi ngotyalo-mali oluvela eLatvia
● IVisa yegolide eLatvia
● Ipasipoti yesibini evela eLatvia
● Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eLatvia ngokutyala izindlu nomhlaba
Best Iiarhente zokuHlala kwakhona ngoTyalo mali eLatvia Kunye namagqwetha ee Ukuhlala kwakhona ngotyalomali eLatvia kunye nabarhwebi beepropathi zokuba ngumhlali eLatvia basebenza ngokudibeneyo kukhuseleko lwabathengi.
Ukuhlala kwakhona ziiarhente zotyalo mali eLatvia kubonelela ngeenkonzo zokuhlala ngokutyala eLatvia, ukuhlala kwakhona ngeenkqubo zotyalo-mali eLatvia, ukuhlala kwakhona ngenkqubo yotyalo-mali eLatvia, indawo yokuhlala yesibini ngokutyala imali eLatvia, ubumi kwakhona ngobutyalo-mali eLatvia, ubumi kunye nokuhlala kutyalo-mali eLatvia , Indawo yokuhlala isigxina ngotyalo-mali eLatvia, Ubume bexeshana ngotyalo-mali eLatvia, Ubume ngokuhlala ngezikimu zotyalo-mali eLatvia, Ubume ngokuhlala ngezikim zotyalo-mali eLatvia, Ubumi ngotyalo-mali eLatvia, Ubummi ngeenkqubo zotyalo-mali eLatvia, Ubumi ngenkqubo yotyalo-mali eLatvia, okwesibini Ubummi ngotyalo-mali eLatvia, ubumi bobabini ngotyalo-mali eLatvia, indawo yokuhlala kunye nobumi ngokutyala eLatvia, ukuhlala kunye nobumi ngokutyala eLatvia, iinkqubo zobumi bobuRhulumente eLatvia, Ubummi ngesikimu sotyalo mali eLatvia, Ubummi ngezikim zotyalo mali eLatvia, okwesibini ipasipoti eLatvia, iipasipoti zesibini eLatvia Inkqubo yesibini yepasipoti eLatvia, ipasipoti yesibini eLatvia, indawo yokuhlala kunye nepasipoti yesibini eLatvia, ipaspoti yesibini yozakuzo eLatvia, ipasipoti yesibini kutyalo-mali eLatvia, ipasipoti yesibini yokuba ngummi eLatvia, iskim sepasipoti yesibini eLatvia, izikimu zepasipoti zesibini eLatvia , iVisa yegolide eLatvia, iiVisa zegolide eLatvia, iinkqubo zevisa zegolide eLatvia, inkqubo yegosa yegolide eLatvia, yesibini visa igolide eLatvia, inkqubo yesibini yeg visa visa eLatvia, visa egolide ezimbini eLatvia, ubumi kunye nevisa yegolide eLatvia, ukuhlala kunye nevisa yegolide eLatvia, ubumi bevisa egolide eLatvia, inkqubo yegosa yegolide eLatvia, izikimu zevisa zegolide eLatvia.
"1 ziyeke izisombululo" kuko konke ukuhlala kwakho ngokutyala eLatvia ngenkxaso eyongezelelweyo.
Utyalomali oluncinci eLatvia lokuHlala kwakhona ngokutyala: EUR 80,000
Intshayelelo eLatvia kunye nokuHlala kwakhona ngoTyalo mali
Funda nzulu ngeLatvia
Imizi-mveliso eLatvia yaqala kwisiqendu sokugqibela senkulungwane yeshumi elinesithoba, kwaye ngasekupheleni kwenkulungwane yamashumi amabini, ilizwe lalilelona lizwe liphucukileyo kwezamazwe aseBaltic. Utshintsho olukhulu lwezemali lwenzeka emva kwenkululeko yaseLatvia ngo-1991, njengoko ilizwe lalisiya phambili lisiya kuqoqosho lwentengiso. Ukuqala ngeye-1990s, uqoqosho lwanda, kwaye phakathi kwinkulungwane yama-21, uninzi lwamashishini eLatvia lwalusebenzisiwe.
Ummandla weBaltic yenye yezona zikhangelwe kakhulu ngabachasi abangaqhelekanga. Phakathi kwamazwe amathathu anika isiseko esimangalisayo kunye nezixhobo zokunxibelelanisa, iLatvia yahlukile ngokunika uncedo olumangalisayo kunye nommiselo wentelekelelo engaqhelekanga.
Inkqubo-sikhokelo yokufunda exhaswa ngurhulumente simahla kubathinjwa abahlala eLatvia, unika ukuba uhlawule izithembiso ezibalulekileyo zomhlala-phantsi kwaye ube nesibonelelo sokuhlala, nangona kunjalo uninzi lubagxotha kunokuba bathathe isigqibo sokuthumela abantwana babo kwisikolo sehlabathi, njengoko uqeqesho lufundiswa IsiNgesi kunye nobuchule buqwalaselwa kwindalo iphela.
ILatvia ilikhaya kwiikholeji ezimbini ezibalulekileyo, iYunivesithi yaseRiga yezobuGcisa kunye neYunivesithi yaseLatvia, kunye neziseko ezahlukeneyo ezizezinye kubandakanya iYunivesithi yaseLatvia yezoLimo kunye neDyugavpils University.
Iinkonzo zonyango eLatvia
Isakhelo sokhathalelo lonyango eLatvia sixhaswa ngumncedisi womhlalaphantsi womdibaniso kunye nezavenge ezincinci zonyango ezithile kwaye zilawulwa ziiNkonzo zezeMpilo zeLatvia.
Inkqubo-sikhokelo yoluntu iyafumaneka ukukhuphela ngaphandle ukusebenza kunye nokuhlala eLatvia, nangona kunjalo, kuya kubakho izityholo ezincinci kulawulo oluthile, kwaye uhlobo lwenkathalelo ayisiyonto efanayo nenani elifanayo lamanye amazwe aseYurophu.
Ngaphandle kwento yokuba sele iphucukile mva nje, isikhokelo sokhathalelo lonyango lwaseLatvia sisesona siphakathi kwezona zoyikekayo eYurophu ngenxa yokuxhoma ixesha elide kunyango, iiofisi ezingancediyo, kunye nokusilela kwabasebenzi bezonyango kunye nonyango. Ubungakanani beeklinikhi ezingxamisekileyo eLatvia zahlulwe ukusukela ngo-2008, kwaye inani elikhulu leengcali zalo zeklinikhi eziphezulu ziye zaya kusebenza kumazwe ahlukeneyo.
Yiyo loo nto uninzi lwabathinjwa abahlala eLatvia bethatha ukhuseleko lwabucala, kwaye basebenzise iofisi yabucala eRiga, idolophu elikomkhulu okanye bafune unyango ngaphandle kweLatvia kwilizwe elisondeleyo nelineeofisi zabucala ezingcono.
Ukuba unqwenela ukuqhuba kumbutho wesitalato iLatvia ongama-72,444 km, uya kuba nokhetho lokwenza oko ngokusesikweni kangangesiqingatha seminyaka ngemvume yokuqhuba evela kwilizwe lakho lokuzalwa.
Ngelixa izitalato zedolophu enkulu kunye neendlela ezihamba ngomgaqo ziya kuba zikumgangatho owamkelekileyo, izitrato kwimimandla yephondo zisenokulahlekisa, ke abo bathinjiweyo bahlala eLatvia bakhuthazwa ukuba baqhube ngononophelo.
Inani elikhulu loluntu lwasezidolophini lunemibutho ebanzi yezothutho yoluntu, ukanti ukuthuthwa okuvulekileyo akuqhelekanga kwimimandla yephondo.
Iinkcukacha ezisisiseko sokuhlala kwakhona ngoTyalo mali eLatvia
Ubuncinci botyalomali Ukuhlala kwakhona ngokutyala eLatvia
Imirhumo eyongezelelweyo visa yegolide ye Lathviya
Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eLatvia
D visa / imvume yokuhlala ixesha elide (iminyaka emi-2 + neminyaka emi-3)
Iqhubekeka nexesha lokuhlala ngokutyala eLatvia
Emva kweminyaka emi-5 yokuphila ngokusemthethweni
Emva kweminyaka emi-5 nenqanaba le-PR.
Ubumi obuBini buvunyelwe kubemi baseLatvia
Iinketho zotyalo mali ze Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eLatvia
Ummi wabatyali mali Kwinqanaba le-0% lenzala € 1million etyale imali kwi-bond
Utyalomali lweshishini Kwiminyaka emi-3, i-500,000 ityalwe kwiShishini laseIreland
Utyalomali € 500,000 etyalomali kwingxowa mali evunyiweyo.
Iitrasti zeNtengiso yeNdawo Utyalomali oluncinci kuyo nayiphi na i-Irish REIT edweliswe kwi-Irish Stock Exchange ye-EUR 2 yezigidi. Utyalomali olubalelwa kwi-EUR 2 yezigidi lunokuhanjiswa ngeendlela ezahlukeneyo ze-Irish REIT.
Utyalomali oluxubekileyo Utyalo-mali kwipropathi yokuhlala kunye nexabiso elincinci le-EUR 450,000 kunye notyalo-mali ngqo kwi-bond yabatyali bamanye amazwe efikelela kwi-EUR 500,000, kunye notyalo-mali oluncinci lwe-EUR 950,000. Isixa sotyalo mali kwi bond asisahambelani noqikelelo lwamaxabiso lomhlaba othengiweyo.
Isipho Umrhumo womntu wobubele we-EUR 500,000 (i-EUR 400,000 apho abantu aba-5 okanye nangaphezulu badibanisa izibonelelo zabo zeprojekthi enye efanelekileyo).
Kutheni uye kuhlala kwindawo yokuhlala ngokutyala eLatvia
Lathviya is ilizwe elincinci leBaltic elinobulungu obupheleleyo be-EU kunye neSchengen. Inika inkqubo elula yokuhlala kubomi bakho kunye nosapho lwakho. Uya kuba nokufikelela ngaphandle kwe-visa kuwo onke amazwe angama-26 engingqi yeSchengen. Ngaphandle koko, uya kuba nokufikelela kwimfundo yezempilo kunye nokhathalelo lwempilo eLatvia, kunye nelungelo lokuhlala kwaye usebenze apho. Akukho zimo zokuhlala ngokomzimba, nangona kunjalo, ungangena kwaye ulishiye ilizwe amaxesha amaninzi njengoko unqwenela.
Ukufudukela kosapho eLatvia
Ngokukhawuleza xa imvume yakho yokuhlala yabiwa, iqabane lakho kunye nabantwana abangaphantsi kweminyaka yobudala bakho banokufumana iimvume zokuhlala ngokusekwe kwinkqubo yokudibanisa usapho.
Ukuhlala kwakhona ngenkqubo yotyalo-mali eLatvia
Uya kunikwa imvume yeminyaka emihlanu yokuhlala, onokuthi uyenze banzi ngaphandle kotyalo-mali olongezelelweyo. Awudingi kubonelela ngobukho eLatvia, ekuphela kweemfuno kukuba ube nedilesi ebhalisiweyo kwaye uchithe ubuncinci usuku olunye ngonyaka. Emva kokuba neminyaka eli-5 yokuhlala ngokusemthethweni elizweni, unokufumana ubumi.
Imfuno yemali yeLatvia
Zintathu iindlela onokukhetha kuzo ukuba nendawo yokuhlala eLatvia. Into yokuqala kukuba ungathenga izindlu nomhlaba eLatvia okungenani i-EUR 250,000. Inketho yesibini kukuzibophelela kukarhulumente ngaphandle kwenzala, kunye nemfuno encinci ye-EUR 250,000. Kwaye ekugqibeleni, ungatyala imali kwi-bond yebhanki ubuncinci be-EUR 280,000, kwaye ufumane inzala kutyalo-mali lwakho. Lonke utyalomali kufuneka lugcinwe kangangesithuba seminyaka emi-5. Umrhumo omncinci waseburhulumenteni we-EUR 25,000 uza kuhlawulwa kwibhondi karhulumente kunye nokukhetha iibhondi zebhanki.
Inkxaso yabathengi kubuhlali ngokutyala imali eLatvia
Iqela lethu Kuhlala ngaBatyali-mali baseLatvia kwaye Kuhlala ngoTyalo-mali Amagqwetha yeLatvia ibonelela abaxhasi kunye neentsapho zabo eLatvia ngenkxaso yokuba ngabemi ngotyalo-mali oluvela eLatvia, indawo yokuhlala ngokutyala imali evela eLatvia kunye namanye amathuba otyalo mali, kumazwe angama-37.
Iinkonzo zethu aziphelelanga nje ekuhlaleni ngokutyala imali eLatvia okanye eGolden Visa yaseLatvia okanye kubumi ngotyalo-mali oluvela eLatvia okanye ipasipoti yesibini, sikwanceda nakwezona mali zibalaseleyo zokufumana izindlu eLatvia, ukubonelela ngesisombululo esipheleleyo ukuba ufuna ukuseka inkampani ILatvia okanye kude nonxweme, izibonelelo zabasebenzi eLatvia nokunye okuninzi, okubandakanya ukucwangciswa kwezemali nokunye okuninzi.
Ukunceda abathengi bethu ngezisombululo ezisekwe kubemi eLatvia nakwindawo yokuhlala yesibini.
Inkxaso ekhethekileyo kubemi baseLatvia:
Sibonelela ngexabiso eliphantsi Ukuhlala kwakhona ngeenkonzo zotyalo-mali yeLatvia, ngokufikeleleka kwethu Utyalo-mali kunye nomthetho wokungena eLatvia, abarhwebi abafudukela kwamanye amazwe eLatvia, indawo yokuhlala efikelelekayo ngabacebisi botyalo-mali eLatvia, indawo yokuhlala efikelelekayo ngamagqwetha otyalo-mali eLatvia kunye nenkampani yabathengi efikelelekayo yokungena eLatvia
Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali ukusuka eLatvia ukuya kumazwe angama-37.
IVisa yegolide eLatvia ukuya kumazwe angama-37.
Ubumi ngokutyala imali ukusuka eLatvia ukuya kumazwe angama-37.
Ipasipoti yesibini ukusuka eLatvia ukuya kumazwe angama-37.
Ukufudukela eShishini ngokusuka eLatvia ukuya kumazwe angama-106.
Ukuhlala kwakhona ngeenkqubo zotyalo-mali ezivela eLatvia.
Iinkqubo zeVisa zegolide eLatvia ukuya kumazwe angama-37.
Ubumi beenkqubo zotyalo-mali ukusuka eLatvia ukuya kumazwe angama-37.
Iipasipoti yesibini ukusuka eLatvia ukuya kumazwe angama-37.
Iinkqubo zokufuduka kweshishini ukusuka eLatvia ukuya kumazwe angama-106.
Ukuhlala kwakhona ngoTyalo-mali lwaseLatvia ngokuThengisa izindlu
Sibonelela ngenkxaso kutyalo mali kwiarhente yokuthengiswa kwezindlu kunye nomhlaba eLatvia sinombono wokuba umthengi kufuneka afumane imbuyekezo entle kutyalo-mali eLatvia, nanini na, xa befuna ukuphuma kutyalo-mali olwenziwe ngabo lokuba ngabahlali ngokutyala eLatvia. Sidibene nabaphuhlisi abambalwa bezindlu eLatvia abanerekhodi elungileyo kwaye ipropathi yabo ikwindawo ezintle eLatvia, bezisa eyona mbuyekezo.
Eyona nkqubo yokuhlala kwezindlu eLatvia ngotyalo mali kwizindlu nomhlaba eLatvia.
Kufuneka uyazi - Indawo yokuhlala yaseLatvia ngotyalo mali
Ukuhlala kwakhona nguGqwetha loTyalo-mali eLatvia kuya kubonelela ngoncedo lwamaxwebhu oluncedo malunga nokuba ngumhlali kwakho ngempumelelo ngokutyala imali eLatvia. Iinkonzo zethu zomgangatho wokuba ngumhlali ngokuTyala imali eLatvia kubandakanya:
Amagqwetha ethu aya kuziqonda iimfuno zakho zokufuduka eLatvia okanye eLatvia, ngokusekwe kwiziphakamiso ezinokuthi zenziwe
Siqhuba inkuthalo yokuqala ngenxa yoku, ukulungiselela ingxelo ngaphambi kokucebisa ukuba ngumhlali ngokutyala imali eLatvia kubaxumi ukuze bafumane imvume yokuhlala eLatvia kunye nokunciphisa umngcipheko wokwala.
Ngokusekwe kwingxelo yenkuthalo eLatvia, sikwacebisa ezinye iinkqubo zempumelelo engcono.
Ukuze siqhubele phambili kunye nokuhlala kwakho ngokufaka isicelo sotyalo-mali eLatvia kuya kufuneka ukuba sikhuphele iikopi zabathengi kunye namalungu epasipoti.
Ukuguqulelwa kunye ne-apostille yamaxwebhu Ukuhlala kwakhona ngesicelo sotyalo mali eLatvia. Amagqwetha ethu akhethekileyo okuhlala ngokutyala imali eLatvia kunye negosa legolide liya kunceda ekugcwaliseni iifom namaxwebhu.
Nje ukuba amaxwebhu akho okuhlala kwakhona nosapho lwakho afake isicelo sokutyala imali eLatvia, siya kuyigcwalisa ngabasemagunyeni baseLatvia.
Nje ukuba isicelo sakho sokuhlala ngokutyala eLatvia samkelwe, sabelana ngeendaba ezimnandi nawe kwaye siqala ukulungiselela ezinye izixhasi.
Asixhasi okanye sibonelela ngokuhlala kwakhona ngeenkonzo zotyalo-mali eLatvia kubantu abakhankanywe apha ngezantsi okanye amashishini eLatvia:
Kuhlala ngeenkonzo zotyalo mali eLatvia azinikezelwa kubaRhwebi okanye abasasazi bezixhobo kunye neembumbulu ezisuka eLatvia.
Kuhlala ngeenkqubo zotyalo-mali eLatvia azinikezelwanga ukugadwa ngobuchwephesha eLatvia okanye kwi-espionage yemizi-mveliso yeenkqubo zotyalo-mali ngaphakathi okanye ukusuka okanye ukuya eLatvia.
Kuhlala ngokubonisana notyalo mali eLatvia awanikezelwa ngayo nayiphi na into engekho mthethweni okanye ulwaphulo mthetho eLatvia.
Kuhlala ngenkxaso yotyalo mali yeLatvia ayisiyonto yabantu abajongana nemathiriyeli yemfuza eLatvia.
Kuhlala ngeenkonzo zotyalo mali eLatvia ayisiyoshishini elisebenza ngezixhobo ezinobungozi okanye eziyingozi zebhayoloji okanye zenyukliya eLatvia.
Kuhlala ngenkqubo yotyalo mali Inkxaso yeLatvia ayifumaneki kubantu baseLatvia abasebenza kurhwebo, ukugcinwa eLatvia, okanye ukuhanjiswa kwamalungu oLuntu.
Kuhlala ngotyalo-mali yeLatvia ayizizo iiarhente zokwamkela abantwana ngokungekho mthethweni.
Kuhlala iinkonzo zenkqubo yeLatvia ayizizo ezenkolo kunye noncedo lwabo eLatvia.
Kuhlala ngeenkonzo zotyalo-mali kwi Lathviya ayibonelelwa ngabantu abajongana nemifanekiso engamanyala eLatvia.
Indawo yethu yokuhlala Amagqwetha eLatvia abaxhasi ukurhweba ngokuthengisa iziyobisi eLatvia.
“Isaziso Esibalulekileyo : Izisombululo zeMM INC zithatha amanyathelo okulumkisa ukuqinisekisa amaxwebhu e-AML kubathengi baseLatvia kunye ne-KYC yabo kodwa asamkeli naluphi na uxanduva kuko nakuphi na ukwaliwa kwabasemagunyeni eLatvia ukwamkelwa kwesicelo Kuhlala ngotyalo-mali eLatvia.
Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eLatvia nakwamanye amazwe, kunye nezinye izinto ezininzi ezixhasayo.
Sibonelela ngoBumi obuBalaseleyo ngenkxaso yotyalo-mali eLatvia yotyalo-mali, ukufudukela kwelinye ilizwe kunye nokucwangciswa kwezindlu kunye nomhlaba eLatvia.
Ixhaswe kukuhlala kwamazwe ngamava otyalo-mali kunye neemfuno zomthetho waseLatvia, senza ezona zisombululo zilungileyo.
Indawo esihlala kuyo ngeenkonzo zotyalo-mali eLatvia zibonelela ngamaxabiso aphantsi, ngezinga lempumelelo eLatvia.
Sithathe iminyaka yamava okuhlala kwakhona eLatvia exhasa abathengi kunye neentsapho zabo eLatvia.
Amava okuhlala kwakhona ngamagqwetha otyalo mali eLatvia kunye nabameli bezomthetho eLatvia ababonelela ngenkxaso kubaxhasi.
Sinezona solicitors zibalaseleyo kunye neearhente zenkqubo yokusingathwa kweLatvia kunye nesicelo esizinikele kwimpumelelo yakho.
Ngaphambi kokuhlala kwakho eLatvia nasemva kokuvunywa, ilungu lethu leqela eliphambili liya kuba lapho ngeshishini okanye ngenkxaso yobuqu eLatvia
Sinamava aphesheya kubuhlali ngokutyala kubandakanya neLatvia, ukunceda abathengi abavela kwihlabathi liphela ngeenkonzo ezilungileyo.
Kwimeko apho ukuhlala kwakho ngokutyala eLatvia kungaphumeleli, kukho amanye amazwe angama-36 esiwasebenzelayo, sikulungele ngesicwangciso B.
Bala iindleko zokuhlala kwakhona ngokuTyala imali eLatvia
Ukubala iindleko zokuhlala kwakhona ngokutyala imali eLatvia nceda ugcwalise zonke iinkcukacha kubandakanya amalungu osapho kunye nobudala babo. Ngenxa yenani elikhulu labathengi beLatvia, siyakwazi ukubonelela ngeenkonzo ezingcono ngexabiso eliphantsi. Ukubala kuya kubandakanya, kubandakanya, iindleko zokuhlala kwakhona ngenkqubo yotyalo-mali eLatvia kunye nezinye iindleko.
Iintlobo ze ivisa yeLatvia
Inkqubo yeMvume yokuSebenza eLatvia
Ukuhlala okwethutyana eLatvia
Indawo yokuhlala esisigxina eLatvia
Ukuhlala kwakhona ngoTyalo mali eLatvia nakwezinye iiNkonzo
Sidwelise ezinye iinkonzo ezimbalwa esizibonelela eLatvia kwiimfuno zangoko okanye ezizayo.
Ukuba uceba ukuhambisa usapho lwakho eLatvia ngokutyala imali, thina njengeqabane lakho eLatvia, sikhona ukubonelela ngezinye iinkonzo ezininzi kunye nexesha onokufuna ngalo eLatvia ngamaxabiso afikelelekayo.
Ngaphandle kokuhlala kwakhona ngokubonisana notyalo mali eLatvia, sibonelela ngeshishini, i-IT kunye neenkonzo zeHR eLatvia, ongazukuyifumana phantsi kwesambrela esinye esibonelelwe ngabaphi na abanye abacebisi baseLatvia abasenza sithenge indawo enye eLatvia nakwamanye amazwe angama-106.
"Sityala iminyaka yokulinga kunye nehlabathi jikelele kumazwe angama-106 ukunceda iintsapho, abantu, kunye neshishini eLatvia ekufezekiseni iinjongo kunye neminqweno yabo."
Siyayixhasa indlela yabathengi bethu engaphaya kokuhlala ngokutyala eLatvia ngoncedo lwamagqwetha ethu, abacebisi kunye nababophelelayo eLatvia nakwamanye amazwe.
Singakunceda bhalisa inkampani eLatvia okanye amazwe ase-Offshore kunye namazwe angama-106 (Iindleko zokubhalisa inkampani eLatvia zitshiphu kuthi.)
Iakhawunti yeBhanki eLatvia
Nawuphi na umtyalomali ofudukela eLatvia uya kuyidinga iakhawunti yebhanki yobuqu eLatvia kunye neakhawunti yebhanki yenkampani eLatvia, sinokunceda kwiiakhawunti zebhanki ezingaselunxwemeni.
Isango lokuhlawula eLatvia
Ngaba ufuna ukubonisana eLatvia, kuba Izisombululo zentlawulo yedijithali eLatvia Njengendlela yokuhlawula yesiko okanye yefintech eLatvia okanye kwizisombululo ze-crypto, masixelele
Emva kokuhlala kwakhona ngokutyala imali ILatvia ukuba ucwangcisa qala ishishini ngokuthenga ishishini esele likho eLatvia ukuqala kwangoko eLatvia.
Iinkonzo ze-HR eLatvia
yethu Inkampani yabasebenzi eLatvia inokukunceda ngokugaya abasebenzi ngokukhawuleza. Unako kwakhona Izithuba ezikhoyo eLatvia free.
Iinombolo zeFowuni eyiNtloko eLatvia
Iinkqubo zeefowuni zeshishini zeLatvia kunye amanani abonakalayo eLatvia Amazwe angama-102 kunye nezixeko ezingama-291.
Iinkonzo zoCwangciso lwezeMali eLatvia
Accounting, ngenxa yenkuthalo eLatvia kunye okuninzi kakhulu.
Idilesi yeOfisi eyiyo eLatvia
Ukuseta ishishini eLatvia
Emva kokuhlala ngokutyala eLatvia, ukuseta ishishini kwi Lathviya.
Sinikezela ngezisombululo ezingezantsi ze-IT eLatvia
Uyilo lwewebhu eLatvia
Uphuhliso lwezorhwebo eLatvia
Uphuhliso lwewebhu eLatvia
Uphuhliso lweBlockchain eLatvia
Uphuhliso losetyenziso eLatvia
Uphuhliso lweSoftware eLatvia
Amagqwetha okuhlala kwakhona ngoTyalo mali eLatvia
Sibonelela ngokuhlala ngokusemthethweni kwezisombululo zotyalo-mali eLatvia kwaye impumelelo kubaxumi bethu ibaluleke kakhulu, kuba eLatvia, siziinkokheli, inkampani yethu yezomthetho eLatvia ineearhente zokufudukela eLatvia, saziwa ngokuhambisa awona mava asemagqabini okwenza iinkonzo eLatvia kunye Izisombululo ezicacileyo zotyalo-mali kubantu baseLatvia kunye neentsapho zabo. Ukuhlala kwethu liqela lotyalo-mali eLatvia kubonelela ngezisombululo eziyilwe ngempumelelo yabathengi.
Amalungu osapho lwakho (abantwana, inkosikazi, abazali) banelungelo lokufumana imvume yokuhlala eLatvia, xa imvume yakho yokuhlala eLatvia ivunyiwe.
Amandla egqwetha laseLatvia ayafuneka kuwo onke amanyathelo asemthethweni egameni lakho ngokuHlala kwakhona ngabaceli botyalo-mali eLatvia. Ukuba uhlala eLatvia okanye uceba ukutyelela eLatvia, sinokufumana amandla akho egqwetha apha.
Asibizi mali ingaphezulu ngokufumana Amandla egqwetha. Ukuba uceba ukuqala ubhaliso lwenkampani eLatvia ukude, amandla akho egqwetha kufuneka abhaliswe ngokusemthethweni ukuba asetyenziswe kummandla waseLatvia. Kuxhomekeka kwilizwe ohlala kulo, kufanele ukuba ukhutshiwe okanye ubhaliswe ngokusemthethweni ngummeli waseLatvia.
Imibuzo Ebuzwa Rhoqo - Ukuhlala kwakhona ngoTyalo mali eLatvia
Iyintoni inkcazo yokuhlala ngokutyala eLatvia?
Ukuhlala kwakhona ngotyalo-mali eLatvia, kunokuchazwa njengokufumana indawo yokuhlala eLatvia ngotyalo-mali kuqoqosho lweLatvia ngeendlela ezahlukeneyo ezinje ngeshishini, izindlu nomhlaba, iibhondi zikarhulumente, njl. Faka isicelo sokuhlala ngokutyala imali eLatvia Ixhaswe kukuhlala ngeenkonzo zotyalo-mali eLatvia, ngokuhlala kwethu ngokugqwesileyo ngamagqwetha otyalo-mali eLatvia, indawo yokuhlala eyiyo ngamagqwetha otyalo-mali eLatvia kunye nokuhlala okungcono ngabacebisi ngotyalo-mali eLatvia, abasebenza njengeyona ndawo yokuhlala ibalaseleyo ngamagosa otyalo-mali eLatvia, kunye neefemu ezigqwesileyo zokungena eLatvia.
Ukuhlala kwakhona ngeenkonzo zotyalo mali eLatvia | Ukuhlala kwakhona ziiarhente zotyalo mali eLatvia | Ukuhlala kwakhona ngamagqwetha otyalo mali eLatvia | Ukuhlala kwakhona ngamagqwetha otyalo mali eLatvia | Ukuhlala kwakhona ngabacebisi botyalo mali eLatvia
Ithini inkcazo yokuba ngummi ngotyalo-mali eLatvia?
Ubummi ngotyalo-mali eLatvia, bunokuchazwa njengokufumana ubumi baseLatvia ngotyalo-mali kuqoqosho lweLatvia ngeendlela ezahlukeneyo ezinje ngeshishini, izindlu nomhlaba, iibhondi zikarhulumente, njl. Faka isicelo sokuba ngummi ngotyalo-mali eLatvia, ubummi ngenkqubo yotyalo-mali eLatvia exhaswa ngabemi beenkonzo zotyalo-mali eLatvia, ngobumi bethu obugqwesileyo ngamagqwetha otyalo-mali eLatvia, abemi abangcono ngabameli ngamagosa otyalo-mali eLatvia nangobumi obugqwesileyo ngabacebisi botyalo-mali eLatvia, abasebenza ubumi obugqwesileyo ngabameli botyalo mali eLatvia, kunye neefem zokubonisana nabantu abafudukela eLatvia.
Iinkonzo zothutho ngamaxabiso afikelelekayo eLatvia | Amaxabiso afikelelekayo okufudukela eLatvia | Utyalomali olufikelelekayo kumagqwetha eLatvia | Abatyali mali abafikelelekayo eLatvia | Abatyali mali abafikelelekayo eLatvia | Iifemu zomthetho ezingenaxabiso ezifikelelekayo eLatvia
Ithini inkcazo yepasipoti yesibini eLatvia?
Ipasipoti yesibini eLatvia, inokuchazwa njengokufumana ubumi obusemthethweni baseLatvia ngotyalo-mali kuqoqosho lweLatvia ngeendlela ezahlukeneyo ezinje, izindlu nomhlaba, ishishini, iibhondi zikarhulumente, njl. Iinkonzo zokundwendwela zesibini eLatvia, ngamagqwetha esibini eepasipoti eLatvia, amagqwetha esibini eepasipoti eLatvia kunye nabaphenyi besibini abaphumeleleyo eLatvia, abasebenza kwiiarhente zokundwendwela eziseLatvia, kunye neefem zokubonisana nabantu zokufika eLatvia.
Iinkonzo zokundwendwela zesibini zeLatvia | Iiarhente zokundwendwela zesibini eLatvia | Amagqwetha esibini epasipoti eLatvia | Igqwetha lesibini lokundwendwela eLatvia | Abacebisi bokundwendwela besibini eLatvia
Yintoni inkcazo yevisa yegolide eLatvia?
IVisa yegolide eLatvia, inokuchazwa njengokufumana imvume yokuhlala eLatvia ngotyalo-mali kuqoqosho lweLatvia ngeendlela ezahlukeneyo ezinje, iibhondi zikarhulumente, ishishini, izindlu nomhlaba, njl. Iinkonzo zeVisa zegolide eLatvia, ngamagqwetha egolide aseLatvia, amagqwetha egosa aseLatvia kunye nabacebisi begosa abagqwesileyo beLatvia, abasebenza kwiiarhente zevisa zegolide eLatvia, kunye neefem zokubonisana nabantu abafudukela eLatvia.
Iinkonzo zevisa ezimnandi zeLatvia | Iiarhente zevisa ezimnandi eLatvia | Amagqwetha egosa egolide eLatvia | Amagqwetha egosa egolide eLatvia | Abacebisi nge visa beLatvia
Lithini elona mali lisezantsi lokuhlala ngokutyala eLatvia?
Ubuncinci botyalo-mali kubuhlali ngokutyala eLatvia yi-EUR 80,000.
Ngaba ubonelela ngenkxaso yezomthetho eLatvia yoBuhlali ngokuTyala imali?
Ewe, igqwetha lethu eLatvia kunye neearhente eLatvia zibonelela ngenkxaso kubuhlali ngokutyala eLatvia.
Ngaba ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eLatvia kuyabiza?
Iindleko zokuhlala kubuTyalo-mali eLatvia kunye nokuHlala kwakhona ngeemfuno zengxowa mali yotyalo-mali eLatvia yeyabantu abaphezulu abaxabisekileyo, sihlawulisa kuphela umrhumo wokubonisana ngoBuhlali ngoTyalo-mali eLatvia, sikwabonelela ngenkxaso-mali eninzi yoBuhlali kwakhona ngezisombululo zotyalo mali.
Leliphi ilizwe labahlali abanokufaka isicelo sokuhlala ngokutyala eLatvia okanye nge-visa yabatyali mali eLatvia?
Ukuhlala kwakhona ngeenkonzo zotyalo-mali kunokusetyenziswa ngabemi beliphi ilizwe kodwa imizekelo embalwa kukuhlala ngokutyala eLatvia ukusuka eAsia, ukuhlala kwakhona kutyalo-mali eLatvia ukusuka e-Afrika, ukuhlala kwakhona kutyalo-mali eLatvia ukusuka eYurophu, ukuhlala kwakhona kutyalo-mali eLatvia ukusuka eMzantsi Melika, Indawo yokuhlala ngotyalo-mali eLatvia isuka eMalaysia, Indawo yokuhlala ngokutyala eLatvia isuka eBangladesh, Indawo yokuhlala ngokutyala eLatvia isuka eIndonesia, Indawo yokuhlala ngotyalomali eLatvia isuka eSri Lanka, Indawo yokuhlala ngotyalo-mali eLatvia isuka eNepal, Indawo yokuhlala ngoTyalo-mali eLatvia isuka eIndiya naseBuhlali ngokutyala imali eLatvia isuka kwi-UAE.
Indawo yokuhlala yobungcali ngesiKhokelo kuTyalo-mali yeLatvia
Cela ukubonisana simahla malunga nokuhlala kwakho ngoTyalo mali eLatvia
Amagama abalulekileyo kubuhlali ngokuTyala imali eLatvia
Hlanganisa kwi ISebe lokuFudukela eLatvia , linoxanduva lokuqulunqa imigaqo-nkqubo yokukhawulezisa uMfuduko eLatvia